Tuesday January 09, 2018 - 11:47:39 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga magaalada Garoowe ayaa sheegay in deegaanno ka tirsan Puntland soo galeen dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab oo baxsad ka ah duqeymaha cirka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo maamul gobolleedyada intaba isku mowqif laga yahay dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab.
‘’Al-shabaab in lala dagaalamo isku mowqif ayaan ka nahay haddii ay joogaan Koonfurta Soomaaliya iyo haddii ay joogaan Puntland intaba, sidaa daraadeed waa in aan amniga ka wada shaqeyno ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Isagoo ka hadlay Madaxweyne Farmaajo dhibaatooyinka ay ururka Al-shabaab ku hayaan dalka Soomaaliya ayuu yiri;-
‘’Dhibta Al-shabaab ay ku hayaan Koonfur meel walba wuu yaalaa, hadda waxaa ay bilaabeen markii ay culeys dareemaanba in ay aadaan meelaha ay is leeyihiin waad ku nabadgaleysaan, sida Shabaabka hadda ku dhuumaaleysanaya oo kale deegaannada Puntland’’ ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Ururka Al-Shabaab iyo koox ka go’oday oo sheegatay inay daacad u yihiin ururka IS ayaa ku sugan qeybo kamid ah maamul goboleedka Puntland iyagoo halkaas weeraro ugaga qaada ciidamada maamulka Puntland.